James Swan oo wadahadal la yeeshay madaxda wadamada ciidamada ka joogaan Soomaaliya -
Home News James Swan oo wadahadal la yeeshay madaxda wadamada ciidamada ka joogaan Soomaaliya
James Swan oo wadahadal la yeeshay madaxda wadamada ciidamada ka joogaan Soomaaliya
Ergayga gaarka ah Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa wadahadal dhinaca taleefanka ah waxa uu la yeeshay Wasiirada Arrimaha Dibadda Dalalka ku haboohay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Qoraal kasoo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Danjire James uu Wasiirada Arrimaha dibadda Jabuuti, Kenya, Itoobiya iyo Uganda kala hadlay sidii doorkooda ay uga qaadan lahaayeen howlaha sugidda amniga dalka gaar ahaan doorashooyinka.
“Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan waxa uu bogaadiyey fursadda toddobaadkan tagay uu u helay in uu khadka taleefoonka kula hadlo Wasiirrada Arrimaha Dibadda ee Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Yugaandha si uu uga dhageysto aragtidooda ku saabsan xaaladda Soomaaliya iyo gobolka xilligan xasaasiga ah” ayaa lagu yiri qoraalka James Swan.
Wakiilka gaarka ah ee Qaramada Midoobay James Swan ayaa dadaal xoog leh ugu jira sidii dalka Soomaaliya ay uga dhici lahayd doorasho.
Previous articleXasan Sheekh oo ku eedeeyay dowlada Soomaaliya inay dayacday dacwadda Badda ee Kenya iyo Soomaaliya
Next articleUrurada Bulshada Rayidka oo ku taliyay in shirka arimaha doorashooyinka lagu qabto Muqdisho